China na-ekpuchi oghere maka ikuku gas, Canopy Light Fitting, Led Canopy Fixtures Manufacturer
Nkọwa:Ebube na-ahụ maka ikuku gas,Ngwunye Nwepu Ike,Led Canopy Fixtures,Mgba ọkụ nke anyanwụ,,
Home > Ngwaahịa > Ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ > 60w Na-ekpuchi Ìhè
Ngwaahịa nke 60w Na-ekpuchi Ìhè , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ebube na-ahụ maka ikuku gas , Ngwunye Nwepu Ike suppliers / factory, wholesale high-quality products of Led Canopy Fixtures R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Led Canopy Lighting Fixture 75W 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
Enwere ike ịgbanwu ọkụ ọkụ 50W  Kpọtụrụ ugbu a
60W N'èzí n'ọdụ ụgbọ mmiri na-ekpuchi ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
50W Led Low Bay Garage Light Motion Sensor  Kpọtụrụ ugbu a
75W Ebube Motion Egwuregwu Ịgba Ọkụ Na-enwu Ogologo Mmiri  Kpọtụrụ ugbu a
75W Ebube Motion Mgbaba nke Mgbaba  Kpọtụrụ ugbu a
50W Ebube Motion Ebube Na-echekwa Oghere Ngwá Ọrụ  Kpọtụrụ ugbu a
75W Ebube Motion Egwuregwu Ngwá Ngwá Ọrụ  Kpọtụrụ ugbu a
50W Ejiri Oghere Garage na Ihe Motion Sensọ  Kpọtụrụ ugbu a
50W Mpempe akwụkwọ ntanetị ọkụ na-ekpuchi  Kpọtụrụ ugbu a
Mgbidi Ịgba Ọkụ na-ekpuchi n'èzí 75W  Kpọtụrụ ugbu a
75W Ụlọ ụgbọala na-adọba ụgbọala nwere ike ịmị ọkụ  Kpọtụrụ ugbu a
50W Led Outdoor Canopy Light Fixtures ETL  Kpọtụrụ ugbu a
75W Epeepe Mgbaba n'èzí n'ọdụ ụgbọ ala  Kpọtụrụ ugbu a
50W Led Ruo Ngwá Agha Ngwado  Kpọtụrụ ugbu a
ETL IP65 75W Led Canopy Light Bulbs  Kpọtụrụ ugbu a
Ejiri ọkụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ ọkụ 50W  Kpọtụrụ ugbu a
75W ETL Na-acha ọkụ ọkụ na-ekpuchi  Kpọtụrụ ugbu a
ETL 50W Na-echekwa ụgbọ oloko  Kpọtụrụ ugbu a
75W Mpụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ maka ebe obibi gas  Kpọtụrụ ugbu a
50W Mpụpụ Mkpọpụ Led Kit IP65  Kpọtụrụ ugbu a
Anyị Philips Led Canopy Lighting bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a na-enye ọkụ ọkụ dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. The Dugara kanopi Light eletrik nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka...
Ngwá Agha Ngwá Agha Anyị 50w bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a na- enwu ọkụ ọkụ ọkụ dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Igwe ọkụ na-acha ọkụ na-acha ọkụ nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka...
Ọnụahịa otu: USD 32 / Piece/Pieces
Ejiri Oghere Ndị Na-ere Garage 60W nyepụta mmepụta lumen dị elu 6600lm site na 110lm / w. Ọdịdị nke Ụlọ Elu Igwe Mmiri a na-ewuli ya elu, ọ ga-eju gị anya maka ókè ebe mkpuchi dị. Ogologo elu anyị n'èzí edepụtara maka awa 50,000. Nnukwu quanlity...
Anyị Led Low Bay Light Fixtures nwere usoro ngwa ngwa nke mere ọ dịghị mkpa ịmepee ọkụ ọkụ Led Low Bay maka ndozi ma ọ bụ ndozi nke na-azọpụta oge maka onye ọrụ ngo. mee ihe site na ihe kachasị elu, ndị Led Low Bay Garage Lighting emebere iji nye...
Ọnụahịa otu: USD 24 / Piece/Pieces
Nke a na-eji ọkụ ọkụ na-egbuke egbuke nke Philips SMD 3030. 75W Low Bay Lighting nwere ike ịbụ nke kwekọrọ na 200-250W HPS / HID. The Low Bay Light Fitting bụ Egwuregwu Ultra-thin, na-eji ụdị ihe ọhụrụ, modular, obere-profaịlụ imewe. Anyị na-eji...
Onye ọ bụla na- adọba ụgbọala na-ekpuchi ihe ngosi abịa na onye na-akwọ ụgbọ ala (DOB) nke na-egbochi njedebe nke nsonaazụ ọkụ dị iche iche iji nye ezigbo ọkụ ọkụ na 9000 lumens, ya na 120 lm / W nke njedebe dị elu na arụmọrụ na-adịte aka. A...
3 ndenye ikike Mgbaba ụgbọala maka ugbo ala enwere ike ime ihe n'ime ime ụlọ ma ọ bụ ọkara n'èzí n'èzí, dị ka ụlọ mposi ime ụlọ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nhazi kọmputa, nchekwa ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ nsị, ụlọ ọrụ gas, ụlọ nrịba, ụlọ...
Anyị 75 na-egbukepụ egbukepụ egbuke ụgbọala ụgbọala Garage mere na elu Lumen mmepụta LED ibe, 5000k ìhè ìhè. Nke a 75W Garage Ịgba Ọkụ Mmiri na -ejikọta 250W HPS / HID / HALITE ìhè ya na ọkwa dị elu nke 120lumens per watt, ruo 9000lm na obere obere...
Uhie Kwadoro 50W Ebube Mgbagharị Mgbaji nwere nnukwu mma Diana ibe na Philips LUMILEDs nwere nnukwu ìhè. Igwe Garage a na Motion Sensor bụ ETL depụtara nke pụtara ndị a Garage Led Light Fixtures na -esonyere a 5 Afọ ikike. Mgbanwe a na-arụ ọrụ ụgbọ...
Dochie ochie 175W fixtures na a ike ịrụ ọrụ nke ọma 50W Exterior kanopi Lighting. Ihe mmepụta ya 6000lm bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke oge ochie, na-enwu n'akụkụ nkuku ọ bụla. Nke a nwere ike ịbanye na ya bụ ETL edepụtara maka ya...
Ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ anyị nwere 75w na-enye 9000 Lumens na 5000K Light White. Mgbapụ ndị na-ahụ maka ebe gas dika ndi-mọ-ozi nādakwasi gi. Dịbaa ụgwọ kọmputa gị ruo na 84%, 250W HPS / HID dochie ya na 75W N'èzí Canopy Lighting Fixtures . Ntụle ndụ...
A na-agbanye eriri ọkụ 75W nwere arụmọrụ ọkụ nke 120Lm / W, 5000k ìhè na-acha ọcha. Ụlọ ọrụ Gas a na-eme ka ìhè dị mma maka ebe obibi na azụmahịa site na 100v ruo 277V. E nwere 4 nkwado na azụ, ị nwere ike iwunye Canopy Lighting Fixtures dị mfe na...
Anyị 50W Ike Light Fixtures Na-acha ọcha (5000K) agba nke ìhè na 6000 lumens nke mmepụta, na-enye ìhè, elu-àgwà ìhè, na-abawanye nchebe na nche. Mbelata ike, mmezi na ụgwọ eletrik gị site na dochie 150W na 200W metal halide na 50W Led Outdoor Canopy...
75W Epeepe Mgbaba n'èzí n'ọdụ ụgbọ ala
Nke a na- emepụta ọkụ ọkụ na -emepụta na ETL kwadoro. Ngwá Agha Ntanaka 75W anyị bụ f ma ọ bụ Ọrụ Ụlọ Ahịa na Ụlọ Ọrụ Na-eji Ebe Ejiri Ikike Na-achọ. Ihe mkpuchi nke Ìhè nke 75 ga- adababara maka Gas Stations, Garages, Ụlọ nkwakọba ihe, Ogwe Office,...
50W Led Ruo Ngwá Agha Ngwado
Oké ọrụ na-anwụ-igba aluminum ụlọ, pụrụ iche Square imewe nke okpomọkụ sink, ume-saving.This mputa Dugara N'uko kanopi eletrik nwere IP65 Waterproof ọkwa. Nke a na- emechi ihe nwere 50W nwere ụdị nke usoro nhazi.Bọbụ na-adịgide adịgide, nkwụnye...
Nke a 70W Led Canopy Ìhè nyeere 8400 LM na 5000K ìhè White. Nnukwu arụ ọrụ ruo 120mm / w! The Dimmable Dugara kanopi Ìhè nwere p ower Nrụpụta ọrụ karịa 95% na ogologo ndụ oge 50,000 awa. 75W Led Canopy Light Bulbs with ETL Depụtara provides top...
Ejikere 50 Ejiri Na-enwu N'okpuru Ikike Mkpuchi nwere ihe ruru 6000 Lumens ma nwee ike dochie ọkụ HPS / HID / HALIDE ọkụ 175W. Nke a mere ka kanopi Retrofit bụ ụzọ dị mma ị ga-esi na-aga LED ma zọpụta ego! Ejiji anyị na-ekpuchi windo na- eji...
75W ETL Na-acha ọkụ ọkụ na-ekpuchi
75W Na-enwu Mgbapụ maka Ọdụ gas na- enyepụta mmepụta ọkụ ọkụ 8250lm site 110lm / w. A na-ewuli elu nke ọkụ ndị dị na Led Canopy Lines, ọ ga-eju gị anya na ókè mpaghara ebe a dị. Ogo kachasị mma anyị nwere ike ịgbanwu ọkụ edepụtara maka awa 50,000....
Jiri Puppu Mpupu Uhie 50W iji dochie 175W HPS / HID ma zọpụta 80% na ụgwọ eletrik gị. Zere imechi bọlbụ mgbe ị na-agbanye na 50W Garage Canopy Light nke nwere oge ndụ 50,000+. Nke a Lop Canopy 50W bụ IP65 Waterproof gosiri. N'ihe na-egbuke...
Anyị 75W kanopi Ikanam ọkụ maka Gas Stations P roviding a ụbọchị na-acha ọcha (5000K) agba nke ìhè na 8250 lumens nke mmepụta, na-anapụta-egbuke egbuke, elu-edu ìhè, enwekwu nchekwa na nche. Nke a na- eme ka ọkụ ọkụ na-enwu nwere 2 Ụdị usoro ntinye....
50W Mpụpụ Mkpọpụ Led Kit IP65
Anyị 50W kanopi Light Dugara 5000k ìhè ọcha ka na Philip SMD3030 Ikanam ibe. Ejiri Agbanwe Uzo A 50W nwere ike dochie anya 175W HPS / HID bọlbụ. Onyinye Mpempe ọkụ w orks ọma maka residential na azụmahịa were na 100-277VAC.The ụlọ a na-atụpụ...
China 60w Na-ekpuchi Ìhè Ngwa
Anyị na- edepụta ìhè ìhè 60w anyị maka awa 50,000 nke ndụ, Led Canopy Lights For Gas Station bụ nnukwu ihe ọkụshade ihe na-enye ebe dị mma maka ikpo ọkụ. Anyị Ngwunye Nwepu Ike dị mma iji mee ka ìhè dị na nkwụnye ngwongwo, ụlọ, ụlọ ahịa ụlọ, okirikiri, ngwa ngwa ọkụ ọkụ. Led Canopy Fixtures na-etinye efere n'elu efere azụ, dị mfe iji wụnye.Obere afọ ise anyị na-ekpuchi ihe mkpuchi anyị na-enweghị njedebe.
Ebube na-ahụ maka ikuku gas Ngwunye Nwepu Ike Led Canopy Fixtures Mgba ọkụ nke anyanwụ Ebe nchekwa ikuku gas